Geedi socodka hal abuurka abuurista astaanta cusub ee Guinness | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Dhiirrigelinta, logos
Naqshadaynta astaanta ka timid sumad la aqoonsan yahay waa inuu maraa gacmaha istuudiyaha ugu caansan oo caan ah. In kabadan hal nooc oo khamri ah sida Guinness, oo ah midka ugu caansan aduunka.
Biir lagu iibiyay in ka badan 150 dal iyadoo 10 milyan oo biir lagu cabo maalin kasta adduunka. Guinnes ayaa dhawaan soo bandhigi doonta astaan ​​dib loo eegay oo ay naqshadeysay Design Bridge, oo ah istuudiyaha fadhigiisu yahay London.
Si aad u keento a cusub qaadashada astaanta Guiness la aqoonsan karo, Naqshadeynta Buundada waxay adeegsatay moodello ay iyadu iskeed u sameysay iyo jeesjeesyo qashin kala duwan oo lagu sameeyay hagidda qaar ka mid ah soo saarayaasha kataarada, Niebisch & Treee.
Nidaamkan wada shaqeynta ah ayaa kooxda u oggolaaday dhex gasho qaababka iyo xarriiqyada garabka, laga soo bilaabo qalooca astaamaha ee qoorta harmonic illaa habka hoosku u saadaaliyo qalabka, hubinta in qaabeyntaadu u egtahay oo ay dareemeyso sida ugu macquulsan.
Markii Design Bridge uu dhammeeyay sawirkiisa, waxaan u geeyay Gerry Barney, oo leh farqiga inuu yahay kan loogu talagalay astaanta Tareenka Ingiriiska sanadkii 1965. Wuxuu sawiray nooca midabka ah ee astaanta ee hoos ka daawo.
Ugu dambeyntii waa la dhaafay inuu la shaqeeyo New North Press inaad ku soo saarto astaanta farsamooyinka daabacaadda ee kala duwan si aad uhesho midka kugu habboon adiga soo saarista midabka iyo maxay noqon laheyd ugu dambeyn dijitaalka kataaradda ugu dambeysa
Natiijadu waa isku dhafan tahay qaab lama filaan ah oo ka soo horjeeda hooska caadiga ah ama xitaa bixinta 3D ee astaamaha qaarkood.
Astaanta kama dambaysta ahi waa wax lala yaabo oo la yaab leh. Ka fogow isbeddellada ugu yar aad u maalmahan socda. Faahfaahinta ayaa si muuqata looga dheehan karayaa astaanta baaxad weyn.
Design Bridge waxay cadeyneysaa in astaanta cusub ay si fiican u shaqeyn karto qaar ka mid ah biir farsamada gacanta ee Yurub daabacadaha kooban ee Afrika. Astaan ​​astaan ​​sare leh oo kufiican kuwa qadarinaya Guinness wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Astaanta cusub ee loo yaqaan 'Guinness beer' oo ay soo saartay Design Bridge
Sawirada birta ah ee cajiibka ah ee Gil Bruvel